अर्थ – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. अर्थ – BhanuKhabar | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
काठमान्डौ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता ४ हजार पुर्‍याएका हुन् । हाल सरकारले ज्येष्ठ…
भानु खबर । तनहुँमा सञ्चालन गर्न लागिएको पिसिआर परिक्षण प्रयोगशालालाई अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको छ । तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ का निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठको पहलमा व्यास…
काठमाण्डौ, कार्तिक १४ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले आज संघ सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गर्नुभएको छ । भेटमा मुख्यमन्त्रि गुरुङले प्रदेशका विभिन्न आयोजना तथा योजनाहरूमा बजेट निकासका लागि…
वार्षिक उत्सवमा बृद्धबृद्धालाई फलफुल वितरण
राम बहादुर धामी ,आँबुखैरेनी । तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका–१, बरादीस्थित मिरमिरे लघुवित्त वित्तिय संस्थाले आफ्नोे १० औं बार्षिक उत्सवको अवसरमा बृद्धबृद्धालाई फलफुल बितरण गरेको छ । संस्थाको १० औं बार्षिक उत्सवको…
नरेश्वरटारमा फुड बैंक
भानु खबर । तनहुँको भानु नगरपालिका वडा २ को नारेश्वरटारमा फुड बैंक स्थापन भएको छ । स्थानीय युनिटी ग्रुपमा आवद्ध युवाहरुले “हुनेले दिएर जाऊँ नहुनेले लिएर जाऊँ भन्दै “उक्त फुड…
दमौली । तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणको काम शुरु भएको छ । आयोजनाको तेस्रो प्याकेजअन्तर्गतको २२० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि काम शुरु भएको हो । प्रसारण…